News Collection: मन्त्री बन्न के के भयो माओवादीमा?
मन्त्री बन्न के के भयो माओवादीमा?
काठमाडौं। सत्ताले क्रान्तिकारी पार्टीलाई कति चाँडो ओरालो लगाउँछ भन्ने कुरा एकीकृत माओवादीमा यसपटक छरपस्ट भएको छ। सायद त्यही भएर होला फागुन २१ गते इलाम पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीको एमालेकरण शुरु भएको भन्दै अब यो पार्टी आफूले जोगाउन नसक्ने संकेत गरे। उनले कार्यकर्ताले नजोगाउने हो भने एमाले हुनबाट माओवादीलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताए। हालैको स्थायी समिति बैठकमा मन्त्री बन्नका लागि भएको विवाद र मन्त्री बन्नेहरुले आफूलाई गरेको घेराबन्दीबाट शिथिल बनेका प्रचण्डले यो लफडाबाट उम्किन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई सरकारको नेतृत्व गरेर जान प्रस्ताव गरेको समेत खुलासा भएको छ।
बाबुरामलाई प्रस्ताव झलनाथ प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै कसको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा जाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको थियो। सरकारमा जानका लागि नेता तथा सभासद्हरुले प्रचण्डलाई एक्लै र सामूहिक रुपमा दबाबमात्र होइन कतिपयले त सामुहिक विद्रोहको धम्कीसमेत दिइरहेका थिए। मधेशी र सुदूरपश्चिमे आफ्ना निकटस्थहरुले यसपालि महत्वपूर्ण मन्त्रालय नपाउने हो भने क्षेत्रीय पार्टी खोल्नेसम्मको तयारी गरेको सूचना पनि प्रचण्डले लिइरहेका थिए। अर्कातिर आफ्ना दायाँ र बायाँ हात भनिएकाहरुले पनि गृह, शिक्षा, भौतिक योजना, ऊर्जा जस्ता मन्त्रालय ताकेर अप्ठेरो पारिरहेका थिए। गृह नभए वर्षमान पुन नै आफूसँग नरहने खालका चलखेल पनि प्रचण्डले बुझिरहेका थिए भने जनार्दन शर्माले क्याम्प चेन्ज गर्ने मूड बनाएको खबरबाट पनि उनी बन्चित थिएनन्। यसबीचमा अध्यक्ष प्रचण्डले उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई अर्थ तथा बरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री लिएर सरकारमा जान अनुरोध गरेको भएपनि भट्टराईले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे। प्रचण्डले बाबुरामलाई जुनसुकै नियतले त्यो प्रस्ताव राखेका भए पनि बाबुरामले स्वीकार गर्ने कुनै गुन्जायस थिएन।
काजीको सपना दुई उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई सरकारमा नजाने भएनि पदाधिकारीभित्रैबाट नेतृत्व गरेर माओवादी सरकारमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका उनीहरु दुवैले गरेका थिए। त्यसबाट अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मुख मिठ्याउन थालिसकेका थिए। तर त्यहीबीचमा चर्चा सुरु भयो, महासचिव रामबहादुर थापा बादलको। आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जाने सम्भावना देखेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बादलको चर्चा सुरु भएपछि निराशमात्र बनेनन्, जुनसुकै हालतमा बादललाई रोक्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे। यसपटक बादलले नेतृत्व गरेर गएमा अब अर्को पटक उपाध्यक्षको पालो नआउने अनुमान गरेर श्रेष्ठले आफ्नो चलखेल बढाए। प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा आफूले मन्त्री बन्न नपाउने ठानी नारायणकाजीकै जोडबलमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको चर्चा पनि पार्टीभित्र उनैले चलाए। नारायणकाजीको नेतृत्व बैद्य र बाबुरामलाई स्वीकार्य थिएन, बादलको नेतृत्वमा सरकारमा जान बैद्य र भट्टराई तयार भएपनि प्र्रचण्ड भने त्यसका लागि तयार भएनन्।
बादलको बबाल आफ्नो सवै पक्षको सहमति जुट्ने ठानेर चुपचाप बसेका बादलसमेत प्रचण्ड नै आफ्नो विपक्षमा देखिएपछि आक्रोशित बने। कार्यकर्ताको दबाब र आफ्नै अन्तरमनलाई समेत बन्धनमा राखेर चुनवाङदेखि साथ दिंदा पनि प्रचण्डले आफूलाई विश्वास नगरेको रुपमा बादलले यस घटनालाई लिए। पालुङटार विस्तारित बैठकदेखि भृकुटीमण्डपको बाबुरामको बहिस्कार प्रकरणसम्म आउँदा बादलले जुन रुपमा प्रचण्डलाई साथ दिए, तर सरकारको नेतृत्व गरेर पठाउने बेलामा प्रचण्डले बादललाई होइन महरालाई अघि सारेपछि बादल स्तब्ध बने। प्रायः रिजर्भ बस्ने र आफ्नो लागि अरुले बोलिदिऊन् भन्ने स्वभावका बादलले फागुन १८ गते बुधवारको बैठकमा भने मुखै खोलेर प्रचण्डको विरोध गरे। उनले पार्टीका पदाधिकारीमध्ये आफू जिम्मेवारीविहीन भएको भन्दै सरकारको जिम्मेवारी अप्रत्यक्ष रुपमा मागे। बैद्य र बाबुराम बादल नभए सचिव सीपी गजुरेल उभ्याउने पक्षमा थिए। तर प्रचण्डले गजुरेलको त झन् नामै सुन्न चाहेनन्। बाबुरामका लागि बादल, गजुरेल र महरा जो भए पनि खासै विरोध वा समर्थन थिएन। किनकि उनीहरु तीनै जनाबाट बाबुरामले कहिल्यै सहयोग र समर्थन पाएका थिएनन्।
नारायणकाजी पनि आफू हुन नपाउने भएपछि बादल र गजुरेलभन्दा महरा नै भए हुन्थ्यो भन्ने लाइनमा उभिए। अन्ततः मोहन वैद्यले दह्रो खुट्टा टेक्न नसकेपछि महराको नाम पारित गराउन प्रचण्ड सफल भएको चर्चा माओवादी वृत्तमा चल्ने गरेको छ। स्थायी समिति बैठकबाट अनन्तलाई गृहमन्त्रीको रिजर्भ फोर्समा राख्न नपाएपछि प्रचण्डले आफ्ना निकट सहयोगी महरा र अनन्तलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित सरकारमा पठाउन सफल भएका छन्। बाबुरामको जोडबलका कारण टोपबहादुर रायमाझीले सबैले आँखा लगाएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। बादल र गजुरेल दुवैको नाममा दहि्रलो अडान लिन नसक्दा वैद्यले केही गुमाएका छन्। देव गुरुङ उधारो गृहमन्त्रीमा खुम्चिएपछि वैद्यको कोटाबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा पर्यटनमन्त्री बनेका छन्।
उडायो सपना हुरीले एमाओवादीबाट बन्ने ११ जना मन्त्रीका लागि करीव २ सय जनाको नाम आएको थियो। तर मन्त्रीका रुपमा चर्चामा आएका र आउन रुचाएकाहरुको सपना पूरा नहुने भएको छ। यतिसम्मकि स्थायी समिति बैठकमै पुगिसकेका मन्त्रीका सम्भावित बरिष्ठ नेताहरुको नाम समेत काटिएको छ। नारायणकाजी श्रेष्ठको जोडबलमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्वास्थ्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका गिरिराजमणि पोखरेललाई अमिक शेरचनले अंकुश लगाइदिएका छन्। सधैभरि एकैजना हुन मिल्दैन, अब लिलामणिको भनेर अमिकले छिर्के हानेपछि गिरिराजमणिको फेरि मन्त्री बन्ने सपना हुरीले उडाएको छ। त्यस्तै शिक्षामन्त्रीमा जान खुट्टा उचालेर बसेका प्रचण्डका देव्रे हात अग्नि सापकोटालाई पार्टीभित्रैबाट सुराकी लागेर एमालेमा खबर पठाई गंगालाल तुलाधरलाई खडा गरिएपछि उनको पनि सम्भावना अन्त्य भएको चर्चा अग्नि निकटस्थहरुले गरेका छन्। त्यस्तै सभासद्लाई मात्रै मन्त्री बनाउने तयारी भएपछि प्रचण्ड निवास नयाँ बजारमा मुकाम खडा गरेर बस्ने हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत, रामकुमार शर्मा लगायतको पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना टरेको छ भने काभ्रेका सूर्यमान दोङले हरुवा तामाङलाई मन्त्री बनाउने हो भने जितुवा तामाङहरुले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएपछि नुवाकोटका हितबहादुर तामाङ पनि मन्त्री बन्नबाट बन्चित हुने भएको छन्। यस्तै मन्त्रीमा चर्चा गरिएका दीनानाथ शर्मा पनि टोपबहादुर रायमाझीले भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि मन्त्रीको सूचीबाट बाहिरिएका छन्।
माओवादीले अब सात फूलमन्त्री र केही राज्यमन्त्री छान्नुपर्ने छ। जसमा भट्टराईनिकट प्रभु साहले भूमिसुधार मन्त्रालय र प्रचण्डनिकट जयपुरी घर्तीले महिला बालबालिका मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ। त्यस्तै प्रचण्ड निकट सुदूरपश्चिमका लेखराज भट्टले श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ, यद्यपि सुदूरपश्चिमका अन्य सभासदहरुले सधैं लेखराजले मात्रै ठेक्का पाएको भन्दै विरोध गर्न थालेका छन्।